Sorona ara-panahy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Sakafo ara-panahy
Tamin'ny andron'ny Testamenta Taloha, nanao sorona ho an'ny zavatra rehetra ny Hebreo. Ny toe-javatra samihafa sy ny toe-javatra samihafa dia mitaky ny niharam-boina, toy ny: B. fanatitra dorana, fanatitra hohanina, fanati-pihavanana, fanatitra noho ny ota, na fanati-panonerana. Ny iharam-boina tsirairay dia manana fitsipika sy fitsipika sasany. Ireo niharan-doza koa dia natao tamin'ny andro firavoravoana, volana vaovao, volana feno, sns.
Kristy, Zanak’ondrin’Andriamanitra, no sorona tonga lafatra, natolotra indray mandeha (Hebreo 10), izay nahatonga ny sorona tao amin’ny Testamenta Taloha tsy ilaina. Tahaka ny nahatongavan’i Jesosy hanatanteraka ny lalàna, mba ho lehibe kokoa, ka na ny fikasan’ny fo aza dia mety ho ota, na dia tsy tanteraka aza, dia notanterahiny sy nampitomboiny koa ny fanaovana sorona. Izao isika dia tokony hanao sorona ara-panahy.
Taloha, rehefa namaky ny andininy voalohany amin’ny Romana 12 sy ny andininy faha-17 amin’ny Salamo faha-51 aho, dia nanondrika ny lohako aho ary niteny hoe: Eny, mazava ho azy, ny sorona ara-panahy. Saingy tsy ho niaiky mihitsy aho fa tsy haiko mihitsy ny dikan'izany. Inona no atao hoe sorona ara-panahy? Ary ahoana no hanaovana sorona iray? Tokony hahita zanak’ondry ara-panahy ve aho, ka hametraka izany eo amin’ny alitara ara-panahy, ary hanapaka ny tendany amin’ny antsy ara-panahy? Sa hafa no tian'i Paoly holazaina? (fanontaniana rhetorika ity!)
Ny diksionera dia mamaritra ny olona iray ho toy ny “zavatra fanaovana sorona zavatra sarobidy amin'Andriamanitra.” Inona no azontsika atao mba ho sarobidy Andriamanitra? Tsy mila zavatra avy amintsika Izy. Fa mila fanahy torotoro, vavaka, fiderana ary vatantsika isika.
Mety tsy ho toy ny sorona goavana izany, fa andeha hodinihintsika ny dikan'izany rehetra izany ho an'ny olombelona. Ny avonavona dia toetran'ny zanak'olombelona. Ny fanolorantena fanahy torotoro dia midika hoe mamela ny avonavona sy avonavontsika amin'ny zavatra tsy mahazatra: fanetren-tena.
Ny vavaka - miresaka amin'Andriamanitra, mihaino azy, mieritreritra ny teniny, ny fiarahana sy ny fifandraisany, ny fanahy amin'ny fanahy - mitaky antsika hamoy zavatra hafa izay irintsika mba hahafahantsika mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra.
Mitranga ny fiderana rehefa ataontsika tsy lavitra ny tenantsika ary mifantoka amin'ilay Andriamanitra lehibe eo amin'izao rehetra izao. Ny toe-javatra iainan'ny olona iray dia ny fisaintsainanao ny tenanao ihany. Ny fiderana dia mitondra antsika ho any amin'ny efitry ny seza fiandrianan'ny Tompo, izay ametrahantsika ny lohalika alohan'ny nanjakany.
Romana 12,1 mampianatra antsika hanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona, ​​masina, sitrak’Andriamanitra, izay itoeran’ny fanompoam-panahy. Tsy manao sorona ny vatantsika ho an’Andriamanitr’izao tontolo izao isika, fa mametraka ny vatantsika ho an’Andriamanitra ary manompo azy amin’ny asantsika andavanandro. Tsy misy fisarahana eo amin’ny fotoana ao amin’ny fanompoam-pivavahana sy ny fotoana ivelan’ny fanompoam-pivavahana – lasa fanompoam-pivavahana ny fiainantsika manontolo rehefa mametraka ny vatantsika eo amin’ny alitaran’Andriamanitra isika.
Raha afaka manao sorona ho an'Andriamanitra isan'andro isika dia tsy mampidi-doza ny hampifanaraka an'io amin'izao tontolo izao. Miova isika amin'ny alàlan'ny fampidinana ny avonavontsika, ny sitrapontsika ary ny faniriantsika ny zavatra eto amin'izao tontolo izao, ny firotsahantsika amin'ny tenantsika ary ny fitiavan-tena ho an'ny isa tokana.
Tsy afaka manao sorona sarobidy na sarobidy isika noho ireo.